Iakhawunti yezixhobo ze-OS Wear ezingaphantsi kwe-10% yentengiso yase-US | I-Androidsis
Akumangalisi ukuba uGoogle alishiyile iqonga le-Wear OS, elalisaziwa njenge Android Wear, Kule minyaka mibini idlulileyo. Xa i-Android Wear yaqaliswa ekuqaleni, uGoogle wabonakala ngathi ufuna ukuba ngumgangatho kwimarike yokunxiba, kodwa kwenzeka okwahlukileyo.
Olona hambo luthandekayo kuphela olutsalile umdla onxulumene ne-Android Wear yayiligama lokutshintsha elalikufumene kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Kancinci kancinci. Abavelisi abakwazanga ukongeza umaleko wokwenza ngokobuqu kwizixhobo zabo, isenokuba sesinye isizathu sokuba kube njalo Kuya kusiba nzima ukufumana iiwatchwatches ezilawulwa yile nkqubo yokusebenza.
Inkampani yabacebisi i-NDP ipapashe ingxelo esibonisa ulwazi malunga neemarike ezinxitywayo eMelika. Le ngxelo isibonisa indlela Isabelo sentengiso se-Wear yi-10% kuphelaNgelixa abanye abavelisi, bekhokelwa yi-Apple kwaye belandelwa yi-Samsung kunye neFitbit, banesabelo se-88%. Esinye isabelo, i-2%, kwabelwane ngaso ngabavelisi abanjengoGarmin noXiaomi.
Ngokwengxelo, ukuthengiswa kwe-smartwatch kwi-2018 inyuke nge-51% xa ithelekiswa neka-2017. Ukongeza, iindleko ezityalwe ngabasebenzisi kolu hlobo lwesixhobo zikhuphuke nge-61%, ukufikelela kwi-5.000 yezigidi zeedola.
Iingxelo ezinje ngezi zisekwe kuqikelelo kunye noqikelelo olwenziwe ngabahlalutyi beshishini, ngokubanzi zihlala zichanekile nokuba azichanekanga nge-100% kwaye ngokuqinisekileyo likho igumbi lokuhamba ngokutolika ezi metric.
Kodwa nokuba kukho isibonelelo sokuthandabuza, ukuthengiswa kwezixhobo ze-Wear OS abanyukelanga kukhuphiswano kwaye ukuzama ukutshintsha lo mkhwa, siyaqonda ngoku isivumelwano isigebenga sokukhangela safikelela kwiqela leFossil.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » Iakhawunti yezixhobo ze-OS ze-OS ezingaphantsi kwe-10% yentengiso yase-US
Olona khetho lubalaseleyo kwiDiskokosmiko